Kismayo oo maanta deggan iyo khasaarihii ka dhashay dagaalkii shalay oo sii kordhaysa. – Radio Daljir
Kismayo oo maanta deggan iyo khasaarihii ka dhashay dagaalkii shalay oo sii kordhaysa.
Kismayo, Oct 02 – Xaaladda magaalada Kismayo ee xarunta gobolka J/hoose, ayaa maanta deggan kadib markii shalay uu halkaasi ka dhacay dagaal aad u xooggan oo u dhaxeeyey xoogagga Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam.
Wararka aan haatan ka helayno gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa ay sheegayaan in uu halkaasi ka jiro jawi daganaasho oo aan cago badan ku taagnayn, waxaana wali halkaasi ka taagan cabsi ay qabaan dadka magaalada ku dhaqan taasi oo ku aadan suurto galnimada dagaallo kale oo halkaasi ka qarxa.
Wixii ka danbeeyey shalay duhurkii oo ahayd markii dagaalku joogsaday ma jirin wax iska hor imaado ah oo dib u soo cusboonaaday, hase ahaatee warar aan ka helnay dadka magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ay jireen rasaas xalay laga maqlayey meelo ka mid ah magaalada inkastoo aan la ogayn sababta rasaastaas.
Dagaalkii shalay ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo una dhaxeeyey Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam, ayaa galaaftay nolosha dad aad u tiro badan oo gaarya illaa 30 halka dhaawucuna hadda sii cago-cagaynayo ku dhawaad 80 qof, Kuwaas oo iskugu jira kooxihii dagaallamay iyo dad shacab ah.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la sheegayaa in ay ka mid yihiin saraakiil sar-sare oo ka tirsanaa labadaasi urur ee shalay Kismayo ku diriray.
Dadkii shacabka ahaa ee ka qaxay magaalada Kismaayo ayaa wali ku sugan daafaha magaalada iyo deegaanno ka tirsan gobolkaasi J/hoose, waxaana tiro yar oo dadkaasi ka mid ahi ay hadda bilaabeen in ay dib ugu soo laabtaan magaalada.
Magaalada haatan waxaa gacanta ku haya ururka Al-shabaab, lamana oga halka ay ku sugan-yihiin kooxdii kale ee ay shalay kula dagaallameen magaalada ee Xisbul-Islaam, waxaana wali magaaladaasi dul heehaabaysay cabsi ku saabsan dagaal mar kale ay ku har-damaan Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam.